केरा खा ए को टिकटक बनाउँदा देश निकाला, टिकटकमा भाइरल भएको भिडियो हेर्नुहोस – List Khabar
Home / रोचक / केरा खा ए को टिकटक बनाउँदा देश निकाला, टिकटकमा भाइरल भएको भिडियो हेर्नुहोस
केरा खा ए को टिकटक बनाउँदा देश निकाला, टिकटकमा भाइरल भएको भिडियो हेर्नुहोस
admin November 14, 2021 रोचक Leaveacomment 86 Views
मकर राशिमा शुक्र ग्रहको ठूलो उथलपुथल: यी राशिलाई अत्यन्त शुभ, कुन-कुन ?
मंगल-शुक्रले एकै समयमा मच्चाउँदै ठूलो उथलपुथल, यस राशिका मानिसलाई अत्यन्त अशुभ !
पछिल्लो समय टर्कीमा बस्दै आएका सिरियाली मानिसहरुबीचमा अनौठो ट्रेण्ड चलिरहेको छ। केरा खाँ’दै, केराकै विषयमा जोक गर्दै गरेका भिडियोहरु सोसल मिडियामा अपलोड गरिरहेका छन् उनीहरु । टिकटकमा भाइरल बनिरहेका भिडियोहरुमा केरा खा’ए र जोक गर्ने च्यालेन्ज निकै फैलिरहेको छ।
यी भिडियोहरु आपत्तिजनक देखिँदैनन् र टिकटकको न्यूनतम मापदण्ड भन्दा पनि बाहिर छैनन्। तर यी भिडियोहरु स्वयं जोक गर्ने सिरियाली नागरिकहरुका लागि भने ग ल पा सो बन्दैछन् । घृ णा फैलाउनका लागि उ त्ते ज क तबरले सिरियनहरुले केरा खा’एको आरोप टर्किस अधिकारीहरुले लगाएका छन् । त्यसरी केरा खा ए र जोक गर्दै भिडियो हाल्ने दर्जनौँ सिरियालीहरु पक्राउ परिसकेका छन् र उनीहरुलाई देश निकाला गरिँदैछ । टर्कीमा रहेको ठूलो सिरियन समुदायको बीचमा ति क्त ता बढिरहेको बेला केरा विभाजनको प्रतीक बनेको छ ।
टर्कीको पछिल्लो खराब आर्थिक अवस्थाका विषयमा सिरियन र टर्किस व्यक्तिहरुबीच भएको तातो बहसको भाइरल भिडियोबाट यो केरा च्यालेन्ज प्रभावित भएको हो । टर्कीमा पछिल्लो उच्च मुद्रास्फितिका कारण जनजिविका प्रभावित हुँदै गएको छ । उक्त भिडियोमा एकजना सिरियाली युवतीले फरर्र टर्किस भाषामा बोल्दै शरणार्थीहरुको कार्य नैतिकताको विषयमा बचाउ गरिरहेकी हुन्छिन् । तर त्यसको जवाफमा एक टर्किस नागरिकले चाहीँ सिरियन र अफगानहरुले जागिरमा ठाउँ ओगटेकै कारण टर्किसहरुले आफ्नै देशमा जागिर पाउन छाडेको दाबी गर्दछन् ।
टर्किस प्रहरीले यस्तो केराको जोक गर्दै टिकटकमा भिडियो हाल्ने ११ जना सिरियालीलाई प क्रा उ गरेको र उनीहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी देश निकाला गरिने बताएको छ। त्यस्तै राजधानी इस्तानबुलमा केरा च्यालेन्जका बारेमा टेलिभिजन रि पो र्ट तयार पार्ने एक सिरियाली पत्रकारलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। टर्कीको आप्रवासन महानिर्देशनालयका अनुसार यस्तो भिडियो राख्ने अभियानमा संलग्न हरेकलाई कारवाही गरिने जनाएको छ । बीबीसीबाट
Previous खुकुरीको धारले नाता हेर्दैन’ भन्दै मामाले गरेका थिय भान्जाको हत्या
Next भोलि कार्तिक २९ गते सोमबार ,तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् राशिफल !
त्यसपछि एउटा कुकुरले बालिकाको हात, मुखमा समातेर ढाल्यो । त्यसपछि सबै कुकुरहरू उसलाई एकसाथ खान …